ko htike's prosaic collection: မြန်မာနိုင်ငံမှ (မ)တရားသူကြီးများအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (၂)
မတရားသူကြီးတွေနဲ့ ၊ ရဲတွေရဲ့ နာမည်တွေတော့ သိရပါပြီ။ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ နေရပ်လိပ်စာတွေ စုံစမ်းပြီးတော့ တင်ပေးကြပါအုံး။
22 November 2008 at 00:40
hi Ko Htike!! Chief police Khin Yee is the one who gave the order to give severe sentence to our student leaders( one reliable source phoned me in the other day). He is apparentlyavery infamous as womanizer as well. He is doing this to receive favor from Than Shwe.